सि मन पाउ ईसापूर्व पाँचौं शताब्दीमा चीनका एकजना प्रसिद्ध हाकिमको नाम हो। उनको कथा पनि चिनियाँ लोकप्रिय जन-श्रुतिमध्येको एक भएको छ। उनी निकै सक्षम भएकाले राजाले उनलाई जिल्लाका प्रमुख नियुक्त गरी ये ति भन्ने ठाउँमा खटाए। उनले आफ्नो कार्य-थलोमा पुग्नासाथ सुनाम कमाएका केही स्थानीय बूढा-पाकाहरुलाई बोलाएर भेट गरेका थिए। अनि स्थानीय बासीन्दाहरुसँग उनिलाई सबैभन्दा बढी पीर लागेको कुरा के हो भनेर सोधे। ती बूढा-पाकाहरुको जवाफ के थियो भने हरेक साल जल-देवतालाई दुलही चढाउनु एउटा अति दु:खलाग्दो कुरा हो। यसका कारण यो सारा ये ति जिल्ला कंगाल हुने स्थितिमा पुगेको छ।
कुरा के रहेछ भने त्यो ठाउँ ह्वाङ ह नदीको किनारमै परेकाले ह्वाङ ह नदीमा जल-देवता बसिरहेको भन्ने विश्वास स्थानीय जनतामा रहेछ। ती देवतालाई बलिका रुपमा दुलही नचढाउने हो भने नदीमा बाढी आई जिल्ला सम्पूर्ण सदरमुकाम जलमग्न भई कालको मुखमा पर्नजाने खतरा हुन्छ रे। यसरी लामो समयदेखि यता स्थानीय ठूला ठालु एवम् अधिकारी तथा झाँक्रीको काम गर्ने बूढीहरुले यो विधि सम्पादन गर्न खूब तत्परता देखाउने गरिआएका छन। यस क्रममा अतिरिक्त रकम जुटाउने र त्यो रकम आफैले बाँडचुँड गरेर खाने काम तिनीहरु रहेछ।
ती बूढाहरुको थप जानकारी अनुसार, हरेक वर्षको निश्चित अवधिमा एउटी झाँक्री बूढी यसो बाहिर निरीक्षण गर्न आउँछिन्। जब उनले गरीब परिवारकी रुपमय केटी भेटेर "यसलाई जल-देवताकी श्रीमती हुन पठाउनुपर्छ" भन्छिन्, तब स्थानीय सरकारका तर्फबाट आएका व्यक्तिले नै जबर्जस्ती निज केटीलाई घरबाट लगिदिन्छन्। एकान्त ठाउँमा केटीलाई राम्रोसँग लाउन-खान दिई दश दिन चानचुन पालेपछि बिहाको दिनमा सिंगारिएकी केटीलाई एउटा गुन्द्रीमा बसाएर नदीमा छाडिन्छ र देख्दादेख्दै पानीले निजलाई क्वाप्पै खाइदिन्छ। त्यसपछि झाँक्री बूढीले "अब जल-देवताले मन परेकी दुलही पाइसक्यो" भनेर सम्बन्धित संस्कार आयोजना गर्छिन। सि मन पाउले यो सुनेपछि केही पनि बोलेनन्। ती बूढाहरुले पनि यी नयाँ जिल्ला-प्रमुखबाट के के गर्न सकिएला भनेर सोचेका छैनन।
जल-देवतालाई दुलही चढाउने दिन फेरि आयो। त्यो खबर पाएपछि सिपाहींहरुलाई लिएर सि मन पाउ अघि नै नदीको छेउमा पर्खिरहेका थिए। केही बेरपछि त्यहाँका शक्तियुक्त धनीहरु, सरकारी कर्मचारीहरु तथा जल-देवतालाई चढाउनका लागि छानिराखिएकी केटी पनि सबै आएपुगे र साथमा लगभग सत्तरी वर्ष नाघेकी झाँक्री बूढी पनि।
सि मन पाउले सबै आइसकेपछि ठूलो स्वरले भने--"जल-देवताकी दुलही ल्याइदेऊ, हेरौं उनी कति सुन्दरी छन?" केटीलाई सि मन पाउका अगाडि ल्याइयो। सि मन पाउले यसो हेरे र शिर फर्काएर सबैलाई भने--"यो केटी सुन्दरी नभएकाले जल-देवताकी श्रीमति हुन सक्दिन, तर निज देवताले अवश्य पनि पर्खिरहेकैछ। त्यसैले जल-देवतालाई अर्की सुन्दरी केटी खोजेर एक दिन पछि चढाइदिने जानकारी सुनाइदिन अब झाँक्री बूढीले एक चोटि जानुपर्‍यो।" सबैजना असमञ्जसमा परेको अवस्थामा सिपाहीँहरुले आज्ञा पाएर झाँक्री बूढीलाई उठाएर नदीमा खसालिदिए। एकछिन पर्खेर सि मन पाउले पुनः भने--"के भयो, बूढीको कुनै पनि जवाफ नआएको? यसमा ताकिता गर्न उनकी शिष्यलाई पठाइदेऊ न।" जिल्ला-प्रमुखले सिपाहींहरुसँग झाँक्री बूढीकी एउटा शिष्यलाई पनि नदीमा फालिदिन आदेश दिए। यसरी एकपछि अर्को गरी झाँक्री बूढीका तीनजना शिष्यलाई पनि नदीमा फालियो।
नदीका छेउमा उभिइरहेका ठूला ठालु, सरकारी कर्मचारी तथा तमाशा हेर्नेहरु सबका सब जिल्ल परे। उता सि मन पाउतिर नजर पुर्‍याउने हो भने उनी श्रद्धालु भावमा जल-देवताको जवाफ पाउने प्रतीक्षामा बसिरहेको जस्ता देखिए। अझै केही समय बितेर गएपछि सि मन पाउले जानाजानी भने--"ए, जल-देवताले ती दूतलाई आफूकहाँ धेरै रोकाएर पाहुनालाई अति स्नेह-माया गर्दा पो रहेछन्। भैगो, फेरि एकजनालाई ताकिता गर्न पठाउनुपर्‍यो।" यति भनेपछि उनले यस कुरामा मुछिएका ती स्थानीय ठूला ठालू तथा अधिकृतहरुमाथि आँखा लगाउन थाले। ती व्यक्तिहरुले डराएर आफूलाई पनि जल-देवतासित भेट गर्न नदीमा खसाइदेला कि भनेर घुँडा टेकेर माफी माग्न थाले।
सि मन पाउले स्वर ठूलो पारी त्यहाँ उपस्थित सबै मानिसलाई भने--"जल-देवताले दुलही चाहनु वास्तवमा झुटो कुरा हो। अब पछि कसैले अझै यस्तो काम गर्नखोजेमा सर्वप्रथम उसैलाई नै जल-देवतासित भेटाइदिने गरौं।" त्यसपछि ये ति भन्ने ठाउँमा जल-देवताले दुलही लिनु भन्ने जस्ता वाहियात कुराको नाम-निशाना नै रहेन। त्यसपछि सि मन पाउले आफ्नो क्षमताको प्रयोग गरी त्यहाँ निकै कुशलताका साथ सुशासन चलाए।